Nkwụ ga-alaghachi ahịa na ngwaọrụ ọhụrụ na 2018 | Gam akporosis
Elvis bucatariu | | Mobiles, Noticias
Nkwụ bụ aha nke na-eme ka enwee agụụ n'etiti ọtụtụ n'ime ndị nwere mmasị na teknụzụ na afọ 90 na 2000. E wepụtara akụkọ ọhụrụ n'oge na-adịbeghị anya dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo TCL na-ezube ịmalite ngwaọrụ ọhụrụ n'okpuru akara nkwụ n'otu oge na 2018.
N'oge ngosi IFA 2017, TCL Marketing Manager Stefan Streit kwuru na ụlọ ọrụ ahụ na-akwadebe maka mwepụta nke ngwaahịa ọhụrụ Palm n'afọ ọzọ. Agbanyeghị, ọ jụrụ ikwu ụdị ụdị ngwaọrụ ga-abata na aha a.
Amalitere 1992, Palm Corporation wepụtara obere ngwaọrụ mkpanaaka dịka Palm Pilot PDA, nke bụ a ụzọ nke oge a smartphone onye digital nnyemaaka. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ mepụtakwara sistemụ arụmọrụ nke PDA, akpọrọ Nkwụ OS. Mgbe ụlọ ọrụ ahụ hụrụ na ngwaọrụ ya enweghị ihe ịga nke ọma ọ chọrọ na 2000s, ọ malitere ịmepụta smartphones zuru ezu nke gosipụtara usoro ọrụ ọhụụ akpọrọ webụsaịtị OS.
Otú ọ dị, ahịa nke smartphones ya, dị ka Pre, adịghị elu iji zoo iPhone na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ngwaọrụ gam akporo.
Na afọ 2010, HP zụtara Palm, ma mbadamba na smartphones wepụtara n'okpuru akara a na sistemụ arụmọrụ webOS bụ ọdachi. Nke a mere ka HP resị ngwa webOS yana ọdịnaya ya LG na 2013, na akara aka Palm a TCL na 2014.
Kemgbe afọ 2014, TCL emeghị ihe ọ bụla na aha nkwụ, mana ugbu a ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ na-akwadebe ịmalite ngwaahịa ọhụrụ n'okpuru aha a. TCL ejirila aha Alcatel na-ere smartphones na United States na ahịa ndị ọzọ, na 2016 ọ zụtara ikike iji chepụta ma mepụta ekwentị BlackBerry. Akpa BlackBerry ngwaọrụ, akpọ BlackBerry KEYONE, bụ nke e wepụtara n'afọ a, na na Ọktọba anyị ga-ahụ ekwentị mkpanaaka Blackberry ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na akara aka nkwụ nwere ike ịdị ka nke okenye, ndị na-eto eto na-azụ ekwentị na ngwa ndị ọzọ nwere anụbeghị banyere ya. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-atụ anya ịmụ banyere ụdị ngwaahịa TCL na-ezube ịmalite n'okpuru akara a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nkwụ nwere ike ịlaghachi na ahịa na ngwaọrụ ọhụrụ na 2018
Instagram wepu mmachi kachasị iwe na ikpo okwu ya